बाबुराम भट्टराईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि | Ratopati
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको बताएका हुन् ।
बुधबार दिउँसो ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘सतर्कताका बाबजुद मलाई कोभि–१९ ले पुनः संक्रमण गरेको छ। पीसीआर रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।’
उनले कोरोनाको संक्रमण लक्ष्यण भने समान्य रहेको बताएका छन् । ‘लक्षण सामान्य छ। केही समययता निकट सम्पर्कमा आउनुभएकाहरू सतर्क रहनुहोला। केही दिन आइसोलेसनमा रहनेछु,’ उनले लेखेका छन् । गत कात्तिकमा पनि डा. भट्टराई र पत्नी हिसिला यमीलाई कोरोना संक्रमण भएको थियो।